Archive du 28-mars-2022
Fanavotana ny firenena “Manana vahaolana aho”, hoy i Dada
Noho ny fanamarihana ny fahatsiarovana ny 29 martsa 1947 fotoana nijoroan’ireo Malagasy tia tanindrazana sy niady ho an’ny fahaleovantena,
Tsy mahavaha olana ara-tantara
Feno 75 taona rahampitso ny fahatsiarovana izany hetsika na koa hoe tabataba 1947 izany. Hatramin’izao tsy mahavaha olana ara-tantara izay mpitondra rehetra mifandimby mandray fitondrana eto amin’ity Madagasikara ity
Asa an-tsokosoko any ivelany Vehivavy mpandefa iray indray no tratra
Ramatoa iray mpandefa vehivavy hiasa an-tsokosoko any ivelany no tra-tehaky ny Polisy ny 24 marsa lasa teo. Naharay vaovao mari-pototra ny Polisy amin'ny fisiana olona milaza fa afaka mandefa vehivavy hiasa any ivelany ka
Manapoaka sarom-bilany ny Taxi Manome 12 andro ny Filoha hanesorana ny ben’ny tanàna
Vao fanairana dia efa vavany hatrany ! Horakoraka sy fikapokapoana takotra, sotrobe,… no nentin’ny Fikambanan’ny Taxi eto Antananarivo Renivohitra na ny FTAR tarihin-dRaharinirina Clémence ny tsy fahafalian’izy
Anosizato Atsinanana Ny taizan’ny tompon-trano ihany no nitondra jiolahy
Lehilahy iray 19 taona no tratra namaky trano teny Anosizato Atsinanana ny 26 martsa teo tokony ho tamin' ny 4 ora hariva.
Fikambanana Za.Gasy “Tsy tokony hisy fahavalo afatsy ny fahantrana”
Nampahafantatra misimisy kokoa ny momba azy sy ny tanjony tetsy amin’ny Sava Hotel 67 ha ny Fikambanana “Za.Gasy” na Fikambanana Zanak’i Gasikara, izay efa niorina tany Antsiranana ny 20 desambra 2010.
Fikambanana Fief Mada “Fitsaboana tontolo iainana no atao fa maratra I Madagasikara”
Nahavita namboly zanakazo maherin'ny 2.500 isa tamin'ny toerana atao hoe Masiapapango, fokontany Ankadivola, Kaominina Ambohijanaka, Distrikan'Antsimondrano ny fikambanana Fief Mada, omaly alahady.
Tetezan’Ampasika Nifatratra tany anaty rano ilay fiara 4x4
Fiara 4x4 iray omaly alahady maraina tokony ho tamin'ny 1 ora no nandona ireo arofanina ary nifatratra tany ambany tetezana, teny Ampasika, lalana miazo an’Itaosy.
Tsiry Andriamihantasoa “Manana 20 tapitrisa Ar ny fokontany vao handroso isika”
Fohazy aho rehefa mandroso i Madagasikara hoy ny filoha Ratsiraka talohan'ny nahafatesany araky ny hafatra nampitondrainy ny zanany, hoy ny mpanao politika sady filohan’ny fikambanana Tanora mandray andraikitra na TMA,
Vaky trano sy fifohana rongony Sarona teny Anosipatrana i Rasta
Afa-doza ireo mponina eny amin’iny faritra Anosipatrana iny. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny polisy sy ny andriamasom-pokonolona no nahatraran'ny Polisy an' i rasta izay hikoizana
Eliace Ralaiarimanana « Jereo io sosialim-bahoaka io »
Mamerina ny antso ho an'ny fitondram-panjakana indray ny tenako, hoy ny mpanao politika, Eliace Ralaiarimanana, mba hijery ity sosialim-bahoaka ity fa tena mosary sy mijaly ny zanaka Malagasy.
Andrarezin’ny jazz Malagasy Notolorana mariboninahitra i Fanaiky
Notanterahina ny harivan’ny zoma teo tetsy amin’ny Ivokolo Analakely ny seho sehatra nokarakarain’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera amin’ny alalan’ny OFNAC ho fankalazana ny faha-35 taona
Mbola tany misy Fanjakana ve eto, hoy ingahy Filoha fony nanambara fa ho kandida. Notanisaina ny Delestazy, tsy fandriampahalemana, tsy fanjarian-tsakafo, vidim-piainana,...
Antananarivo Mangotraka indray ny delestazy
Niverina mampikolay indray ny delestazy eto Antananarivo sy ny manodidina. Tena mampiteny ny moana! Ambanilalana Itaosy izao nanomboka tamin'ny zoma hariva no tapaka ny jiro,
Raharaha 29 martsa 1947 75 taona aty aoriana, inona marina no vokany ?
Feno 75 taona rahampitso ny nisian’ny raharaha 29 martsa 1947 teto amin’ny firenena. Misitery, tsiambaratelo, manako amin’ny fiainam-pirenena hatramin’izao,